Apple waxay isu diyaarineysaa inay dib u furto Fifth Avenue Apple Store iyo halbeega quraaradaha halyeeyga ah | Wararka IPhone
Sugitaanku wuxuu umuuqdaa inuu dhammaaday, labada Manhattanites iyo malaayiin dalxiisayaal ah oo sanad walba booqda New York. Kadib ku dhawaad ​​3 sano oo shaqo gudaha ah, dukaankii taariikhiga ahaa ee Apple ee Fifth Avenue ayaa dib u furaya. Cube-ka caanka ah ee dukaankan caanka ku noqday wuxuu durba ka ifayaa bilicdiisa oo dhan, iyadoo filim irid ah oo dhaldhalaalaya uu ka muuqdo.
Apple waxay ku dhiirrigelineysaa dib-u-habeynta halheys "Had iyo jeer u fur maskaxda furan", hal ku dhig nasiib daro ah oo aan la socon taariikh kasta oo tilmaamaysa goorta dib loo furayo jadwalkeeda. Apple ayaa ku dhawaaqday bishii May 2016 in dukaanka si ku meel gaar ah loo xiri doono. Bishii Janaayo 2017, dukaanku wuxuu u xirnaa dadweynaha waxaana bakhaarka loo raray goob uu horey u deggenaa dukaanka toyga ee FAO.
Bishii Meey isla sannadkaas, Apple wuxuu bilaabay inuu kala furfuro cube. Waxay ahayd illaa sanad kadib, Maarso 2018, markii cubeedka quraaradda ee quraafaadka ah dib loo soo ururshay, markii hore waxay ka koobnayd 90 qaybood, laakiin taas dayactirka sanadkii 2011 waxaa laga dhigay oo keliya 15. Fikradda ah in la sameeyo kuubkan quraaradda ah si loogu maro dukaanka ayaa ka yimid Steve Jobs laftiisa.
Dukaanka Shanaad ee Avenue Apple Store ayaa gebi ahaanba dib looga soo dhisay dhulka. Tallaabooyinka jiingadda leh ayaa beddelaya jaranjarada dhalada ah ee duugga ah oo u kacaysa sariirta quraafaadka ah. Fagaaraha uu ku yaallo kuubku waa la hagaajiyay ku darista iftiiminta cirka ee wareega oo bixiya iftiinka dabiiciga ah ee gudaha dukaanka.
Mid ka mid ah crystals-yada qayb ka ah cube, waxaan ka akhrisan karnaa farriinta soo socota:
Dusha sare ee Fifth Avenue hoostiisa, waxaad dhawaan ka ogaan doontaa meel dib loo qiyaasay oo hal-abuurka had iyo jeer lagu soo dhoweeyo Bakhaar 24-saacadood leh oo albaabadu u furan yihiin laydhadhka dhalaalaya iyo riyada waaweyn ee magaaladan, oo diyaar u ah inay ku dhiirrigeliso waxaad samayn karto, soo ogaan karto iyo waxa xiga ee aad samayn karto.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Apple waxay isu diyaarineysaa inay dib u furto Fifth Avenue Apple Store iyo halbeega quraaraddeeda halyeeyga ah